Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulamadii xalay la ciyaaray ee tartanka Europa League – Gool FM
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulamadii xalay la ciyaaray ee tartanka Europa League
(Yurub) 19 Abriil 2019. Kulamo ka tirsan tartanka Europa League ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxaha waa weyn ee Chelsea iyo Arsenal ay u soo baxeen afar dhammaadka tartankaas.
Chelsea ayaa guul 4-3 ah garoonkeeda kaga gaartay naadiga Slavia Prague, waxaana ay gaareen Semi-finalka tartankaas, halka Arsenal ay guul ka soo heshay Napoli oo ay booqatay.
Laad xor ah oo uu dhaliyey Lacazette ayaana Gunners kaga filnaatay inay guul ka soo qaataan kooxda reer Talyaani.
Afarta kooxood ee gaartay Semi-finalka tartanka Europa League xilli ciyaareedkan ayaa waxa ay kala yihii; Arsenal, Chelsea, Eintracht Frankfurt iyo Valencia.
Haddaba waxaan halkaan hoose idin kugu soo gudbinaynaa qaar ka mid ah rikoorradii laga diiwaan geliyey ciyaarihii xalay la ciyaaray ee tartanka Europa League:-
>- Afar kooxood oo Ingiriis ah ayaa markii ugu horreysay gaartay afar dhammaadka tartammada Yurub ee Europa League iyo Champions League hal xilli ciyaareed gudihiisa tan iyo xilli ciyaareedkii 1983-84.
>- Chelsea waa kooxdii ugu horreysay ee 11 guul gaarta tartammada Yurub hal xilli ciyaareed gudihii.
>- The Blues waa kooxdii labaad ee horyaalka Premier League ka dheesha oo gaarta ama dhalisa 100 gool tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan kaddib Manchester City.
>- Olivier Giroud waa ciyaaryahankii ugu horreeyey Chelsea ee dhaliya 10 gool hal xilli ciyaareed gudihiis kubadda cagta Yurub.
>- Giroud ayaa gacan ka geystay 12 gool sagaalkiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ka soo muuqday Europa League, waxa uu dhaliyey sagaal gool isagoo caawiyey saddex gool oo kale.
>- Slavia Prague waa mid ka mid ah afar kooxood oo laga dhaliyey saddex gool ama wax ka badan iyagoo Chelsea kula ciyaaraya garoonka Stamford Bridge tartammada Yurub, waana markii ugu horreysay oo ay sidaasi ka dhacdo Europa League.
>- Tan iyo markii uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay Arsenal bishii Agoosto sanadkii 2017-kii, Lacazette ayaa ku lug yeeshay ama gacan ka geystay 46 gool, waxana uu dhaliyey 33 gool, waxaana uu abuuray ama dhiibay 13 gool oo kale waana in ka badan ciyaaryahan kasta oo kale kooxdan.
>- Kooxda Eintracht Frankfurt ayaa gaartay afar dhammaadka tartan Yurub ah markii ugu horreysay muddo 39 sano ah kaddib.
Kooxda Real Madrid oo horumar ka sameysay saxiixa Luka Jovic… (Maxaa soo kordhay?)